Ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM oo howlgalo ka sameeyey Degmada Afgooye
January 4, 2013 - Written by
Afgooye:-Wararka naga soo gaaraya Degmada Afgooye ee gobolka Shabelaha Hoose ayaa sheegaya in maanta ay howlgalo culus ay ka sameeyeen Afgooye ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM waxaana howlgalada lagu soo qabtay dad looga shakisan yahay in ay wax u dhimayeen amaanka Degmada Afgooye.
Ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM ayaa si wada jir ah u wada howlgalo ka dhacay Degmada Afgooye waxaana ay guriguri u galeen xaafadaha ay ka kooban tahay Degmada Afgooye.
Ciidamada DFS iyo kuwa AMISOM ayaa sidoo kale waxaa ay howlgalo ka sameeyeen wadada u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye iyaga oo xabsiga dhigay askar ka tirsan DFS oo Isbaaro dhigtay wadada u dhaxeysa Afgooye iyo Muqdisho.
Darawalada Gawaarida u kala goosha Afgooye iyo Muqdisho iyo shacabka wadadaas ku safra ayaa cabashooyin badan ay ka soo baxayeen baryahaan ka dib markii ay Isbaaro dhigteen ciidamo ka tirsan DFS.
Guddoomiye kuxigeen dhanka amniga ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Cabdi ayaa xaqiijiyey in saaka ay howlgalo ka socdaan Degmada Afgooye wuxuuna sheegay in ay sii socon doonaan howlgaladaas.